▷ IiCeltic Runes: Intsingiselo, ukutolikwa kunye nokuQokelelwa kweRune
Las ibaleki I-Celtic yindlela ama-Celtic amaqhawe (adume ngayo yonke impawu) ayenayo yokubamba nokubona el mundo ngokwenyama nangokomoya. Inkqubo ye- Iicelic runes yintoni eyinxalenye I-alfabhethi yeRunic, isetyenziswe kwiinkulungwane ze-XNUMX ze-AD
El Celtic oonobumba unamandla amakhulu asetyenziselwa i ubugcisa bomlingo kuba isondla zonke amandla yendalo, umhlaba kunye nomnyele ukutolika kunye xela ikamva elikufutshane.
1 Imvelaphi yeeReltic Runes
2 IiRundes zasimahla zeCelt
3 Reltic roll run online
4 Iintlobo Runes
5 Intsingiselo yeeCeltic Runes zeOracle
6 Iimpawu zeCeltic okanye iironi?
Imvelaphi yeeReltic Runes
El Intsingiselo kunye nemvelaphi yeCeltic Runes kungenxa yomdali wayo UThixo odin, Ukubonisa amandla amakhulu ka-Odin lo Thixo wazixhoma emthini kangangeentsuku ezili-9 emva koko yenza imibhalo ebhaliweyo ye-runic kwi-bark yomthi ofanayo ngokusekwe kubume behlabathi.
Las Oracle Runes Ekuqaleni zazenziwe ngomthi kwaye kamva zavela zisebenzisa ilitye elinemiphetho ejikeleziweyo apho iisimboli zazibhalwe kuzo nganye nganye.
IiRundes zasimahla zeCelt
El ubugcisa bokubhula bemidlalo yeceltic Isimahla inoyilo olwahlukileyo kwihlabathi liphela Ukuvumisa ngeenkwenkwezi. Ngokuchasene neTarot, asetyenziswa amakhadi anje nge Omkhulu uArcana ukuze ndikwazi ukufunda ifayile ye- Tarot kuLuthandokwi ZeMpilo okanye ImaliKwiCelt Tarot, kusetyenziswa amatye okanye iziqwenga zomthi ezineempawu.
Reltic roll run online
Iroli yenziwa ukukhupha kwingxowa yesikhumba, I-runes ezi-3 kwaye ngokweesimboli eziphumileyo, ukutolikwa kuya kunikwa ngumfundi oqeqeshiweyo, ophakathi okanye ofundayo we-tarot. Kubalulekile ukuyazi loo nto I-runes isebenza ukuba nje ubuza umbuzo othile kwaye ungqameneAsinakubuza ngothando ngokubanzi, kufuneka sibuze malunga nento ethile, umzekelo, ukuba umntu wam wangaphambili usacinga ngam.
Kuzo zonke iintlobo zeembaleki ezikhoyo, sinayo:
Imijikelezo yelanga kunye nekamva
Uhlobo ngalunye lweerune lungasetyenziselwa into ethile, akukho ndlela okanye irune roll ngokubanzi apho unokubuza nawuphi na umbuzo ngokubanzi. Umsebenzi weRunes ngemibuzo ethe ngqo kunye nekhonkrithi, ungalibali.
Intsingiselo yeeCeltic Runes zeOracle
El trisquel Yisimboli esingentla esenziwe ziingalo ezintathu ezimilo olujikelezayo apho intsingiselo yalo kukugqibelela kunye nokulingana.
La Celtic umnqamlezo, ichatshazelwe ngokucacileyo yi inkolo yamaKrestu, isangqa esingaphakathi simele ihalo kaKristu, okanye iingcambu zobuhedeni bamaCelt.
La Triquetra, Inemvelaphi ye-Indo-European apho intsingiselo yayo ingubufazi bobufazi kwiindawo ezi-3, ethi "Intombazana", "uMama" kunye "neXhegwazana", okanye into efanayo: "Ubomi", "Ukufa" kunye "nokuzalwa ngokutsha" . AmaCelt analo mqondiso ngokufanayo kunye neVikings kunye nentsingiselo yayo idibene nobufazi, kumfazi ngokwakhe, onika ubomi kwaye anike ukufa.
El Umthi woBomi, kuxa izizwe zaseCelt zakha iilali ezijikeleze iMithi eNgcwele. Kuthetha ukukhuselwa kunye nobulumko.
El Iqhina elingapheliyo Imele uthando, liqhina elingaze liwe kwaye elingenasiphelo. Imele umanyano olungunaphakade lothando kunye nabathandi. Banaphakade, Ubomi obungenasiphelo.
El Claddagh yaqala ukusetyenziswa ngenkulungwane ye-XNUMX eYurophu (eIreland). Isimboli sezandla ezimbini eziphethe intliziyo enesithsaba ngaphezulu sibonakalisa ukuthembeka nokunyaniseka.
La Ukujikeleza kweCelt yaziwa kakhulu kubo bonke, kwaye kwangaxeshanye olona phawu ludala lwenziwe ngumntu. KwamaCelt kwakumele ukuzalwa ngokutsha, kunye nokungafi komoya. Kungenxa yoko le nto bebeyisebenzisa emingcwabeni kwaye uphawu aluphelelanga.
El Sistrel okanye i-Double Spiral, ithetha ububini bezinto ebomini.
La Umnqamlezo weSola Luphawu oludala lwenkolo kuwo wonke umhlaba, ukusuka kwiNeolithic Age ukuya kwiBronze Age yayisetyenziswa. Olu phawu lweCeltic lumele iiquinoxes, isolstices, namaxesha amane onyaka.
El IPentekoste yamaCelt izakuvakala ngathi yinkwenkwezi yayo edumileyo enamanqaku amahlanu. Ngokuchasene noko unokucinga kunye nokunxulumana nobuSathana, iPentagram ithetha ubuThixo, apho zihlala zisetyenziswa kwizithethe ezingcwele.
Uguqulelo ngqo lwe Hayi ukusuka eGaelic, "kukukhuthaza", intsingiselo yayo kukukhanya kokomoya, ukuvumelana phakathi kwezichasi kunye nokusikelela ooThixo.
Uphawu lweCeltic Wuivre oko kuthetha iimpawu zomhlaba, ngumgcini woMama woMhlaba. Iinyoka zazingcwele kubemi beCelt.
Uphawu Lauburu imele iLanga noMntu ngokwalo. Ukuba uLauburu ujika ngasekhohlo umele ubomi buqu, kodwa ukuba uLauburu ujike ngasekunene uyakumela uKufa. Umqondiso wobuntununtunu bomntu kunye naMandla ngokubanzi.
Iimpawu zeCeltic okanye iironi?
Nangona abantu beCeltic basebenzise iViking Alphabet, ukwazile ukuqinisekisa ukuba isimboli sahluke ngokupheleleyo kwimifanekiso ethe kratya kunaleyo IiViking Runes.
Inkolo yobuhedeni-Yazi le Nkolo ngokweenkcukacha